AFG Caravelle Help fadlan
AFG Caravelle Help fadlan sano 3 2 bilood ka hor #568
Waxaan u jeclahay duulaya Caravelle AFG ee FS9 isticmaalo.
Waxaan soo gaadhay goobtaada waxaanan arkay Caravelle. Baahnayn in la yiraahdo, waan soo degsaday oo aan ku rakibay FSX Steam meesha aan haysto dhowr diyaarado oo isku dhafan (PT Tu-154B2, DC-9, iwm).
Rakibaadda si fiican u tegey oo waxaan ugu dhakhsaha badan lahaa in jir guddi Caravelle caan ku raran yihiin.
Asal ahaan laba dhibaato kastoo.
Matoorada diidaan inay si habsami leh u bilowdo. Waxay gaari doonaa RPM gaar ah oo markii aan furo bilowga khaanadaha REVS oo kaliya halkaas joogo. bilowga No.
Anigu ma heli karo qaybood my in ay ka shaqeeyaan. No dhaqdhaqaaqa on qaybood ee lagu qiyaaso iyo dhaqdhaqaaqa ma isu qaybood ah.
Waxaan noqon lahaa runtii ugu mahad celinayaa wixii caawimo / talooyin.
Dareemeysaa dhibaato guddi / eeg ii. Qof kasta oo kale ee Steam isagoo waayo-aragnimo la mid ah please25?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray calypso999.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.169